एक चम्चा तुलसीको पातको पेष्टमा एक चम्चा मह मिसाउने । यसको पेष्ट अनुहारमा लगाउने र त्यसलाई १५ मिनेटपछि पखारल्ने । यसले अनुहारलाई सफा बनाउँछ । (रातोपाटी बाट सभार)
असाध्यै दुख्छ दाँत ? यी ८ प्राकृतिक तरिकाहरुले दिनेछ आराम !!